ग्यास्ट्रिक बढ्यो, घरमै हुने सामान्य उपचारबाट क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ समय: २१:३७:३१
यो समस्या बढ्दै जाँदा बिरामी असन्तोष बढ्ने, कुनै पनि कुरा निल्न समस्या हुने, पेट र पिठ्यूँको तल्लो भाग पोल्ने, वान्ता हुने सम्मका समस्या देखिन्छ ।यसको घरेलु उपचार कसरी गर्ने ?सामग्रीहरु१. एउटा आलू२. एउटा दाना स्याउ विधि:आलुलाई सफासँग पखालेर बोक्रा निकाल्नुहोस् र यसको रस बनाउनुहोस् । स्याउलाई पनि सफा गरेर बोक्रा निकाल्दै जुस बनाउनुहोस् । दुवै रसलाई मिलाएर खाना खानुभन्दा कम्तिमा एक घन्टा अगाडि दिनमा दुईपटक सेवन गर्नुहोस् । यसले तत्काल राहत महसुस हुनेछ ओन्लिआयुर्वेद डट कमको सहयोगमा